उपाधि – Himalaya Television
३१ असोज २०७८ काठमाडौं । ‘हिट ४९ प्रोफेसनल बक्सिङ च्याम्पियनसीप २०२१’को उपाधि बक्सर खेलाडी अविरल घिमिरेले चुमेका छन् । विश्वका युवा पुस्ताका चर्चित र अनुभवि बक्सरलाई मात्र रिङमा उतारिने सो अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी हुने उहाँ पहिलो नेपाली बक्सर हुनुभएको...
भारतलाई साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि, नेपाल ३–० ले पराजित
३१ असोज २०७८ माले । साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमै पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ । माल्दिभ्सको मालेस्थित राष्ट्रिय स्टेडियममा शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपाल भारतसँग तीन शुन्य गोलअन्तरले पराजित भएपछि नेपालको उपाधि जित्ने सपना पूरा हुन...
चेन्नईले जित्यो आईपीएलको उपाधि, कोलकाता २७ रनले पराजित
३० असोज २०७८ मुम्बई । इन्डियन प्रिमियर लीग (आईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको उपाधि चेन्नई सुपर किङ्सले जितेको छ । दुबईमा राति भएको फाइनलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई २७ रनले पराजित गर्दै चेन्नईले उपाधि जितेको हो । चेन्नईले दिएको १ सय ९३...
३० असोज २०७८ काठमाडौं । साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपालले आज चिरप्रतिद्वन्द्वी तथा उपाधिको बलियो दाबेदार भारतसँग खेल्दैछ । साफको फाइनलमा यी दुई टिम पहिलो पटक भिड्न लागेका हुन् । आज नेपाली फुटबलका लागि सबैभन्दा प्रतिक्षाको दिन हुनेछ ।...
आईपीएलको उपाधिका लागि आज चेन्नई र कोलकाता भिड्दै
२९ असोज २०७८ काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लीग (आईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको उपाधिका लागि आज चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेल्दैछन् । खेल नेपाली समय अनुसार आज राति पौने ८ बजे युएईमा शुरु हुनेछ । महेन्द्र सिंह धोनीको...
साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपालले जित्ला ? के भन्छन् प्रशिक्षक मेघराज केसी ? (भिडियो कुराकानीसहित)
२९ असोज २०७८ काठमाडौं । साफ च्याम्पियनसिप फूटबलमा इतिहास रचेको नेपालले चिरपरिचित भारतलाई फाइनलमा प्रतिद्वन्द्वी पाएको छ । भारतसँग फइनलमा समूह चरणमा व्यहोरेको हारको बदला लिने अवसर पनि नेपाललाई छ । तर भारत प्रतिश्पर्धी पाउने बित्तिकै नेपाल मानसिक रुपमा...
आईपीएलको उपाधिका लागि कोलकाता र चेन्नई भिड्ने
२८ असोज २०७८ दुबई । इन्डियन प्रिमियर लीग (आईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको उपाधिका लागि कोलकाता नाइट राइडर्स र चेन्नई सुपर किङ्स खेल्ने भएका छन् । सारजाहमा गएराति भएको दोस्रो क्वालिफायरमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई ३ विकेटले पराजित गर्दै कोलकाता फाइनलमा पुगेको हो...
२८ असोज २०७८ काठमाडौं । साफ च्याम्पियनसिप फूटबलको उपाधिका लागि नेपाल र भारत खेल्ने भएका छन् । हिजो बेलुकी भएको खेलमा भारतले आयोजक माल्दिभ्सलाई ३÷१ गोल अन्तरले हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको हो । यसअघि हिजै भएको खेलमा बंगलादेशसँग...
फ्रान्सले जित्यो युरोपियन नेशन्स लीग फुटबलको उपाधि
२५ असोज २०७८ पेरिस । युरोपियन नेशन्स लीग फुटबलको उपाधि फ्रान्सले जितेको छ । इटालीको मिलानमा भएको फाइनलमा स्पेनलाई २–१ ले पराजित गर्दै फ्रान्सले उपाधि उचालेको हो । ६४औं मिनेटमा मिकेल ओएरजाबेलले स्पेनलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर त्यसको...
चितवनले जित्यो ईपीएलको उपाधि, पोखरा ४ विकेटले पराजित (भिडियो रिपोर्टसहित)
२३ असोज २०७८ काठमाडौं । चौथों संस्करणको एभरेष्ट प्रिमियर लीग (ईपीएल) क्रिकेटको उपाधि चितवन टाइगर्सले जितेको छ । फाइनलमा पोखरा राइनोजलाई ४ विकेटले हराउँदै चितवनले पहिलो पटक ईपीएलको उपाधि जितेको हो । त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस हारेर ब्याटिङको...